トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Labor mari ndiwo kazhinji nepachinko yokumusoro Zvakaoma rutapudzo kuti mutengi
■ Chii kutanga
pashure zvose nepachinko yokumusoro shure management, uye zvinoderedza bhora kubva kutengesa, ndokusaka ari zvinodiwa boka kubvisa akasiyana-siyana mari.
Nemamwe mashoko, kana kushandisa yakawandisa mari, iwe achaparadzwa imari kuti kuderedzwa kuti mutengi kubva okutengesa uwandu. Panguva dzakadaro, maikorofoni kuita uye Illuminations, mumhanzi uye zvakafanana, saka kutungamirira kuti pakukora zvichida, ngatiende usanyengedzwa. Kupinda
chadzainyanya, asi pane basa mari imwe yenhoroondo idzi nokuda guru kurema iri mari Pachinkoya. Sezvo chinobuda Zvinogoneka kuti usingagoni kuderedzwa ari payout kuti mutengi uye pano yakawandisa kushandisa mari, asi tinofanira kuongorora somumwe zviratidzo.
zvakakodzera basa mari nepachinko parlors, ita iwe yaifanira nhamba zvikuru vanhu?
nepachinko muzvitoro, uye zvitoro kunge akatanga hurongwa kuverenga payout rwoga akadana munhu gadziriro, kana kuva bhokisi izere kuisa bhora iri dhora bhokisi, kana iwe enda kumba, kumbira kuti iyerere kunzi mushandi kana kuti inogona kupatsanurwa kuva nepachinko yokumusoro iri kwagara hurongwa. Achitaura basa vashandi vari
nepachinko parlors kuti akatanga pachavo hurongwa, zvichava chete ari kazhinji dambudziko kugadzira. In nepachinko parlors vari kufunga ane kusimbisa vatengi, isu zvino kunge akasuma zhinji. In pauzima hurongwa, vashandi, uye kuroora vachizvikudza patrol chitsuwa vakawanda, kana nyevero kana hapana kufungira vatengi, hakugoni kuva chete pamusoro uye nepachinko muchina rokuchenesa kuti kana mhinduro yemubvunzo wako. Nokuti
, zvichaita zvakakwana kuisa zvitatu 300 vamapoka mugomba nevanhu vaviri. Uyezve, nekuti mutengi isu kuita zvose woga, hauna kukuvara pamwe nhamba iyi vanhu, pasinei oparesheni. In nepachinko yokumusoro pachake hurongwa sumo, kana nhamba iyi kana kupfuura vashandi vaiva, unogona kuva basa rakawandisa mari.
_ x000D_ ndiEzekieri, ari nepachinko yokumusoro rakazaruka riri senguva ino, yava zvikuru kana nhamba revashandi inodiwa. The nepachinko parlors kuti akatanga pachavo gadziriro, nekuti uwandu basa kuuya zvachose zvakasiyana. In randinenge gadziriro, kuti kupanana mari yemombe, basa kupfuura bhora emadhora bhokisi kuti ndege pakaunda, tafura troubleshooting, nepachinko muchina kuchenesa, tine mutengi rutsigiro uye basa siyana. Sezvo iwe chichaitwa basa
vashandi vose, kana kugadzirwa achikwira, yava vashandi zvakafanira nokuda yaizvozvo.
nhasi, kana vakati kwakaderedza nhamba revashandi chete nokuti akasununguka nguva saka, kana nechinhu chipi mukana mashandiro kunova nani, basa ndichazvirumbidza asisiri underserved mu nokukurumidza. Kuti tidzivise chinhu chakadai, mu nepachinko parlors iyo vari inowanzotorwa hurongwa, kana pane uwandu akagadzawo vanenge 300 zviyero, kubva mana matanhatu vashandi vanofanira kuenda kubasa zuva nezuva.
uyu, kunyange kana ino kunyange kurega zuva pasina kumhanya, zvisingachinji.
Saka, kunyange zvazvo inowanzotorwa nepachinko yokumusoro vashandi vane nguva zvichida wegadziriro, achava nzira pasina basa mari. In
nezuva oparesheni hapana nepachinko parlors Ichokwadi nekuti ingava kuti mwero webasa mari haritauri categorically, funga mukuru. Nenzira iyi, chokwadi kuti kana mune mwero webasa mari, achizosiyana zvikuru zvichienderana musumo hurongwa.
Kana Kakare zhinji basa mari, matambudziko chinobuda hakuna diki payout ndechokuti, ndizvozvo. Kana ari nepachinko yokumusoro kuenda nemi, nepachinko parlors uri kushandisa pfachura basa mari vari, edza zvishoma rucherechedzo. Basa, tafura troubleshooting, nepachinko muchina kuchenesa, tine mutengi rutsigiro uye basa siyana. Sezvo iwe chichaitwa basa
Kana Kakare zhinji basa mari, matambudziko chinobuda hakuna diki payout ndechokuti, ndizvozvo. Kana ari nepachinko yokumusoro kuenda nemi, nepachinko parlors uri kushandisa pfachura basa mari vari, edza zvishoma rucherechedzo. Zvakanga kuenda kubasa.
Kana Kakare zhinji basa mari, matambudziko chinobuda hakuna diki payout ndechokuti, ndizvozvo. Kana ari nepachinko yokumusoro kuenda nemi, nepachinko parlors uri kushandisa pfachura basa mari vari, edza zvishoma rucherechedzo.